ISILO sithi sekuyisikhathi sokuyephula ishoba – Bayede News
ISILO sithi sekuyisikhathi sokuyephula ishoba
OMnyama uselikhiphile igama ekade lilindiwe odabeni
Ongangezwe Lakhe noMtwana eMkhosini womhlanga
OMnyama uselikhiphile igama ekade lilindiwe odabeni lomhlaba kaZulu
Emuva kokugwema ukungqubuzana phakathi koBukhosi kanye noHulumeni kazwelonke, ISILO esiyinhloko kaZulu sesiliphimisile igama odabeni olubucayi noluvusa uhlevane oluthinta umhlaba kaZulu owenganyelwe wuhlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi Omdala ube nomhlangano oyisifuba noNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene kanye noMehluleli uJerome Ngwenya onguSihlalo we-Ingonyama Trust Board ngoLwesihlanu ziyisi-9 kuNcwaba eSigodlweni Ondini.
[button color=”green” size=”big” link=”https://www.pressreader.com/south-africa/bayede/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]QHUBEKA UFUNDE[/button]Emuva kokugwema ukungqubuzana phakathi koBukhosi kanye noHulumeni kazwelonke, ISILO esiyinhloko kaZulu sesiliphimisile igama odabeni olubucayi noluvusa uhlevane oluthinta umhlaba kaZulu owenganyelwe wuhlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust. Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi Omdala ube nomhlangano oyisifuba noNdunankulu kaZulu, uMntwana waKwaPhindangene kanye noMehluleli uJerome Ngwenya onguSihlalo we-Ingonyama Trust Board ngoLwesihlanu ziyisi-9 kuNcwaba eSigodlweni Ondini.
Lo mhlangano ulandela umbiko okhishwe yiThimba elaziwa ngePresidential Advisory Panel elabe liholwa nguDkt uVuyokazi Mahlati neliphakamise phakathi kokunye ukuba uMthetho i-Ingonyama Trust ubuyekezwe. Lokhu kukhuluma kuhunyushwa nguZulu njengoku“hlwithwa komhlaba” ongowesizwe ngokomlando.
Isiphakamiso lesi sidale inkulumompikiswano kubantu nokuyilapho obekukhona abathi nembala kumele kwenziwe okuthile ngomhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust ngoba njengoba kusho umbiko kwenza iKwaZulu-Natal ibukeke njengelinye izwe elizimele eNingizimu Afrika. Kwaba nalo mbono kukhona nokukhuluma okuthi ubukhona be-Ingonyama Trust bulandela “isivumelwano esiyimfihlo” esenziwa noZulu (iSILO noNdunankulu waso uMntwana waKwaPhindangene), uMnu uFW de Klerk owayenguMengameli wokugcina woMbuso Wobandlululo noDkt uMandela owayenguMengameli we-African National Congress neyabe isekhaleni lezingxoxo zokuwelisa iNingizimu Afrika kusuka enqubeni yobandlululo kuya kweyedemokhrasi.
Kuthi khona lapho uma (ngokusho kwabaphikisana nalo mbono) befuna ukujivaza lesi sivumelwano bathi senziwa yiSILO, Inkatha kanye noMnu uFW de Klerk bamkhiphe uMandela.
Laba babona iphutha ekutheni njengoba besho “umhlaba unikwe umuntu oyedwa” besho iSILO.
Ngakolunye uhlangothi kukhona abathi empeleni yonke le nkulumo inokungasiqondi isimiso soBukhosi bukaZulu ngoba selokhu kwathi nhlo umhlaba awukaze ube ‘ngowomuntu oyedwa’ kepha Omdala uwubambele isizwe. Laba abasola uHulumeni ngokuhlokoloza uZulu nangezinhlelo zesinyenyela zokumemuka umhlaba wakhe.
Emhlanganweni wangoLwesihlanu olwedlule Omdala ulibeke lavundla elokuthi nakulokhu uZulu uyalingwa njengoba kwaba njalo eminyakeni eli-140 eyedlule. Lapho uZulu waphoqeleka ukuba azithole eseyovikela isimiso soBukhosi eSandlwana ngonyaka we-1879. “Lokhu okusehlelayo yisilingo isibili. Nakulokhu siyachukuluzwa, sephucwa lokho esakulwela iminyaka. Ngowe-1879 kwasetshenziswa izibhamu namabhosho kanti namuhla kusetshenziswa amakhomishini, amathimba nabezindaba ukuba basichukuluze” kusho Omdala. Khona lapho Omdala uveze ukumangala ekutheni lingathi izwe ligajwe yizingqinamba ezingaka kwezomnotho bese kunakwa uZulu.
“Izwe lethu ligajwe yizinkinga ngakwezomnotho. Nami ngehla ngenyuka nje ngiqhwagelela uZulu ukuba igagasi lobumba nendlala ungaligubuzeli. Ngigola izintethe ngenzela abantu bakababa njengoba bengiye kwelamaNgisi nje, kuthi kunjalo bese kubakhona abantu abasichukuluzayo, ngani? Ngento yethu esingayicelanga kumuntu, kepha eyakhiwa ngezingazi zamadodana namadodakazi kaZulu”, kugcizelela Omdala sakubuza.
Kulo mhlangano uBhenjane phuma esiqiwini ulibeke lavundla ekutheni uma kuyikuthi uHulumeni kazwelonke noma uMengameli uRamaphosa unegama noma into afuna ukuyisho kuye noZulu kangagudli iguma kepha akamqonde uZulu naye qobo ukuze kusheshe kudlulwe, isheshe igezelane.
“Sesikhathele yizinhlamba zabafo esizithola nsuku zaphuma. Sibangiswa ifa lethu, ingubo kaZulu. Namathimboxo nje kwabezindaba nalaba abathi bangongoti sebesuzela nje kuZulu. Cha sekwanele, yikho ngithi impela ayiphulwe ishoba manje, ziphindwe zinqunywe lezi zimpondo zale nkomo esezicijiselwe uZulu”, kusho Omdala.
IMbizo noMengameliNgalesi sikhathi imikhonto iya ngokucija ezweni kulandela isiphakamiso esenziwe yiPresidential Advisory Panel. USihlalo waleli Thimba uDkt uMahlati ohlelweni lukamabonakude ugcizelele okuthile nathe akucaci kwabezindaba. Ephawula ohlelweni lukaTim Modise uDkt uMahlati uthe umbiko wabo awuphakamisi ukuthi umhlaba uthathwe nanoma yingayiphi indlela kepha udaba lusekuphathweni kwalo mhlaba nangabange esacacisa ukuthi ngalokho usho ukuthini: “Ngodaba lwe-Ingonyama Trust sidinga ukuluqonda silubuke ngokuphele kwenqubo yobuyiswa komhlaba. Kwesinye isikhathi, ngicabanga ukuthi ukuqhamukela lolu daba ngokwabezindaba kwenza lungancomeki. Uma sikhuluma nge-Ingonyama Trust asikhulumi ngezindaba zokumukwa umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Kugxiliswe kakhulu ekuhambisaneni nokuphathwa kanye nobunikazi obufanelekile,” kusho uDkt uMahlati
Yize kunjalo ISILO sibukeka sesikulungele ukubhekana nayinoma ngubani othi akuthathwe umhlaba kaZulu.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi phakathi kwezinto ezimunyungiwe, kanjalo nezinqumo emhlanganweni wangoLwesihlanu olwedlule wudaba lokubandakanya zonke izinhlaka zoBukhosi noZulu wonkana odabeni lombiko. Nokho uvuthondaba luzoba sembizweni nayilapho uMengameli ezomenywa khona ukuba azochazela uZulu ukuthi ume kuphi nokuyisinqumo iSILO esikuveze ngokusobala ukuthi kuyobe sekuwumlenze wokugcina ngasohlangothini lokuhlonipha ukusebenzisana noHulumeni kazwelonke.
“Abantu bakwaZulu bayahlonipha. Bayabuhlonipha ubuholi kepha lokhu kungadidwa nokunye abantu abazicabangela khona. Njengoba uZulu ungakaze nje ube yizindibi kumaNgisi nakumaBhunu ungeke uqale manje ngoba sekunedemokhrasi ukuba wudibi,” kusho Ongangezwe Lakhe.
Encwadini ebhalelwe uNdunakulu Wesifundazwe uZikalala ngaphansi kwesihloko esithi: Ingonyama Trust Board status and its land ownership, ISILO sazisa uNdunankulu ngeMbizo kaZulu nokuyilapho simeme uMengameli ukuba azochaza ngodaba oluthinta umhlaba ongaphansi kweNgonyama lapha kweleNdlovukazi uMthaniya.
“Ngihlongoza ukumema uMengameli okusukela emalungiselelweni enzeka ngaphambi kokuba sihlangane naye mhla ziyisi-6 kuNtulikazi kowezi-2018. Inhloso yalesi simemo ukuba ethule kuyo iMbizo ngodaba olungenhla sibheka izincomo zeThimba lakhe elimelulekayo odabeni lokubuyiswa komhlaba nokusakazeka kwemibiko engemihle nokuhlaselwa kwami ne-Ingonyama Trust. Le ncwadi ngizoyihambisa mina mathupha.”
Le ncwadi yesimemo izothunyelwa kuMengameli ngoMsombuluko mhla zili-19 kuNcwaba.
Kuyo le ncwadi Omdala ayithumele kuNdunankulu wesifundazwe iSILO simazise ngesifiso sokuba ethimbeni laso kube khona namalungu eSishayamthetho. Kulokhu Ongangezwe Lakhe wazise uNdunankulu ukuthi isifiso sakhe uzosidlulisela kuSomlomo weSishayamthetho sesifundazwe. Khona lapho ubuze umbuzo ngolwazi lwesifundazwe ngesiphakamiso sethimba likaMengameli: “Ngizokhuluma noSomlomo ukuba asize ekuhlonzeni amalungu eSishayamthetho azoba yingxenye yezithunywa futhi azosazisa ukuthi uHulumeni wakho iThimba liwuthinte lagcina kuphi ngalolu daba lomhlaba,” kusho incwadi yeSILO eqonde kuNdunankulu. Ngokuthola kwaleli phephandaba isiqalile ukuphothwa intambo enhlabathini kuxhunywana nezinhlaka zoBukhosi ngalolu daba. Khona lapho kunokuxhumana kwabaholi abehlukene abangamaZulu KwaZulu-Natal, kuzwelonke naphesheya kwezilwandle. Ekhuluma eMkhosini wesivivane Ongangezwe Lakhe wazisa isizwe ukuthi uhlelo lonke oluphathelene nokuvikela umhlaba weNgonyama uzolwethula mhla ziyisi-7 kuMandulo ngosuku loMkhosi WoMhlanga.
IBhodi libabaza ‘intimbothi’ Enye yezinto umbiko weThimba likaMengameli uRamaphosa kwezomhlaba elimi kuyo ngelithi, ‘Ingonyama Trust Board (ITB) ayiphethwe kahle ngasezimalini’. Lokhu kuphikiswe njengentimbothi nguSihlalo we-ITB, uMehluleli uNgwenya. Uveze nokuthi le nkulumo kayinabo ubufakazi nokuthi bona qobo kabakaze babizelwe esigcawini noma babuzwe nje ngalokhu kukhuluma . “Amabhuku e-Ingonyama Trust ahleze ecutshungulwa uMcwaningimabhuku Jikelele futhi okuyikhona okuhlala kwenzeka eminyakeni eminingi. Utheni uMcwaningimabhuku Jikelele ngesimo sezimali? Bakuthathaphi konke lokhu abakushoyo ngoba abazange bakhulume nethrasti.” kusho uMehluleli.
Okunye athe kuyamangaza wukuthi noma ngabe i-ITB ayiziphethe kahle izimali okuyinto athi ngamampunge, uthe lokhu wukunqanyulezwa nokujivazwa. Uthe: “Kuyaxaka ukuthi iThimba lithi akuchithwe kuhlakazwe umthetho, yize kukhona izakhiwo zomphakathi ezitholakele ukuthi ziyantula ngokwezimali kodwa azihlakaziwe.
“Asikaze sizwe abantu bethi akuchithwe isakhiwo somphakathi ngenxa yezinsolo zokungaphathwa kahle kwezimali. Umsebenzi wethu uhlolwa ngumphakathi futhi ngisho noMcwaningimabhuku Jikelele akakaze athole sibi kithina. Kuningi okusididayo kule mibiko njengalokho okusifakayo nathi, kodwa akekho noyedwa osinikeze ikhophi,” kuphetha uMehluleli uNgwenya.